window7​အ​တွက် Driver ​မ​လို​ပါ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
window7​အ​တွက် Driver ​မ​လို​ပါ
​မေး​တာ​လဲ ​လူ​တိုင်း​နီး​ပါး​ပါ​ပဲ . ​ကျွန်​တော်​လဲ ​မ​ထူး​ဘူး​ဆို​ပြီး ​ပို့စ်​တင်​လိုက်​ပါ​တယ် . window7​ရဲ့ ​အား​သာ​ချက် ​တစ်​ခု​ထဲ​မှာ driver ​အ​တွက် ​တင်​စ​ရာ​မ​လို​လို့​ပါ​ပဲ . ​ဘယ် PC ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် VGA driver, sound driver, motherboard driver ​နဲ့ ​အ​ခြား​အ​ခြား​သော driver ​များ​ကို ​မ​လို​အပ်​ပါ​ဘူး . driver ​ပျောက်​ဆုံး​နေ​တဲ့​သူ​များ . driver cd ​မ​ရှိ​သူ​များ . ​လက်​ရှိ​ရှိ​နေ​တဲ့ driver cd ​များ​ကို ​အ​မှိုက်​ပုံး​ထဲ​ကို ​ပစ်​ထည့်​လိုက်​လို့​ရ​ပါ​ပြီ. window7​ဟာ driver auto detact ​ပါ . ​တစ်​ကယ့်​ကို ​ဆ​ရာ​ကျ​တယ်​ဗျာ . ​လူ​တိုင်း​နီး​ပါ crazy ​ဖြစ်​ကြ​တဲ့​အ​ထဲ​မှာ driver ​မ​လို​အပ်​တဲ့ ​အ​ချက်​က​လဲ ​တစ်​ချက်​ပါ​တယ် . ​ပြီး​တော့ ​သူ့​ရဲ့​အ​ပြင်​အ​ဆင်​က​လဲ ​တစ်​ကယ်​ကို ​လှ​ပ​တယ် . ​ပေါ့​ပါး​လာ​တယ် . ​အင်​တာ​နက်​သုံး​တာ ​ပို​ပြီး​မြန်​ဆန်​လာ​တယ် . ​အင်​တာ​နက် ​အ​သုံး​ပြု​တဲ့​အ​ချိန် ​မြန်​ဆန်​မှု​ထဲ​မှာ browser ​က​လဲ ​တစ်​ခန်း​တ​က​ဏ္ဍ​ပါ​ဝင်​ပါ​တယ် .7​သုံး​တဲ့​သူ​များ​တွေ​ဟာ ​အ​ခု​ဆို​ရင် ​က​မ္ဘာ​မှာ ​ခ​ဏ​လေး​နဲ့​ကို ​လူ​တိုင်း ​နီး​ပါး​ဟာ window xp ​ရဲ့ ​အား​နည်း​ချက်​နဲ့ vista ​ရဲ့ ​အ​ဆ​မ​တန်​နေ​ရာ ​ယူ​မှု​တွေ​ကို ​စွန့်​လွှတ်​ပြီး window7​ကို ​ဖက်​ကို ​လုံး​ဝ​ကို ​ခုန်​ကူး​လာ​ကြ​တာ​ဟာ window7​ရဲ့ ​စွဲ​ဆောင်​မှု​အား​ကောင်း​တဲ့ ​အ​ချက်​တွေ​ကြောင့်​ဆို​ရင်​လဲ ​မ​မှား​ပါ​ဘူး .
myothant November 6, 2009 at 10:06 PM
window7​အ​တွက် driver ​က Laptop ​မှာ​ဆို​ရင် ​အ​ဆင်​ပြေ​နိုင်​ပါ့​မ​လား ​အ​ကို ​ကျွန်​တော်​က ​ကွန်​ပျူ​တာ​ဆိုင် ​တ​ခု​မှာ ​အ​လုပ်​လုပ်​နေ​တာ​ပါ Laptop ​မှာ window7​တင် ​ချင်​ရင် ​အ​ရင်​ဆုံး vista ​တင်​ပြီး​တော့ driver ​ရှာ ​ပြီး​မှ window7​တင်​နဲ့ ​အ​ချိန်​တော်​တော်​ယူ​ရ​ပါ​တယ်. ​အဲ့​ဒါ ​ဘယ်​လို​အ​ဆင်​ပြေ​နိုင်​မ​လဲ​ဆို​တာ ​သိ​ချင်​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော်​လဲ Laptop ​တ​လုံး​ကို window7​တန်း ​တင်​ပြီး​တော့ ​မ​စမ်း​ရ​သေး​ဘူး ​ကျွန်​တော် ​စမ်း​ကြည့်​ပါ​အုံး​မယ်. ​တ​ချက်​လောက် ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​အုံး​နော်
lynn November 10, 2009 at 10:43 PM
​အဲ​ဒါ​တင်​မ​က​ဘူး​ထင်​တယ်...Format ​ချ​ရ​တာ​လည်း ​မြန်​သ​လား​မ​မေး​နဲ့... ​ဖြတ်​ခ​နဲ​ပဲ
​ဦး​စား​ကြီး January 14, 2010 at 9:08 PM
​ကျ​နော့်​ဆီ​မှာ​တော့ ​လို​နေ​ပါ​တယ်။ device manager ​မှာ unknown device ​ပြ​နေ​ပါ​တယ်။
Intel(R) 82801GBM (ICH7-M/U) LPC Interface Controller - 27B9 ​အဲ​ဒါ​ကို​ပါ။
​ကွန်​ပျူ​တာ​က ibm t60. 1952 ​ဖြစ်​ပါ​တယ်။ ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ.
My gmail add is khitnlinn@gmail.com.
​ဥာဏ်​လင်း​ထက် January 20, 2010 at 10:22 AM
​အ​ကို7 ​ကdriver ​အ​ကုန်​ဆွဲ​မ​တင်​ဘူး​ဗျ။ ​လက်
​တွေ့။ ​သူ့ vista ​ကို​အ​ခြေ​ခံ​ပြီး​ထုတ်​ထား​တဲ့
​ဘုတ်​တွေ​ကို​ပဲ ​ရ​တယ်။​ဘာ​လို့​ဆို​တော့ ​ပ​ထ​မ
​ကျွန်​တော့်​သူ​ငယ်​ချင်း​စက်​တစ် ​လုံး​ကို​တင်​ပေး​တယ်။​သူ့​ဟာ​က model ​အ​မြင့်။
​ရ​တယ်။ ​နောက်​တစ်​လုံး​က ​နဲ​နဲ ​ထုတ်​တာ ​ကြာ
​နေ​ပြီ compaq nc4200။ ​ဒါ​ကြ​တော့​မ​ရ​တော့​ဘူး။ ​သူdriver​ကို ​ဒေါင်း​လုပ်​ဆွဲ​ပေး​ပြီး​ပြန်​တင်​ရ​တယ်။ ​စက်၂
zaw zaw min September 3, 2010 at 1:56 PM
​ကျွန်​တော် computer window7​တင်​တာင်​တာ youtabe ​အ​ထဲ​က video ​ကြည့်​လို့​မ​ရ​ဘူး ​ဘယ်​ဆိုက်​မှ​ကြည်​လို့​မ​ရ​ဘူး video ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ကူ​ညီ​ပါ